असरल्ल कोरोनाका बिरामी पल्टिरहदा डा.क्षेत्रीको अमिलो मन - EAAWAJ (इ-आवाज)
असरल्ल कोरोनाका बिरामी पल्टिरहदा डा.क्षेत्रीको अमिलो मन
June 8, 2021 June 13, 2021 Bidhutma0Comments
कोहलपुर, जेठ २५,
कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ का डाक्टर सन्तोष बुढा क्षेत्रीको बैशाख ३ गतेको दिन अनौठो बन्यो । कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको उपचारमा खटिएका डाक्टर बुढा क्षेत्री बैशाख ३ गते कोहलपुर नगरपालिका बाँकेले कोहलपुर २ मा स्थापना गरेको कोभिड अस्थाई अस्पतालमा नियुक्ति भए । नयाँ वर्षको अवसरमा परिवारसँग रमाइलो गरेर २ दिन बिताएका डा. बुढा क्षेत्री बैशाख ३ गते आफ्नो झोला बोकेर घरबाट निस्किए । डा. क्षेत्री कोरोना संक्रमितको उपचारमा कोभिड अस्थाई अस्पतालमा खटिए ।
विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसले बाँके जिल्लामा पनि भयावह अवस्थाको सिर्जना गर्याे । कोरोनाका बिरामीहरुले नेपालगंज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर तथा भेरी अस्पताल भरिभराउ भएपछि नगरपालिकाले कोभिड अस्थाई अस्पताल सुरु गरेको थियो । सुरु गरेकै दिन वडा नम्बर १४ का एक जना संक्रमितलाई सोही अस्पतालमा ल्याईयो । एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा फन्टलाइनमा खटिएका डाक्टर सन्तोषले बिरामीको उपचार गर्ने हिम्मत गरे । चिकित्सकको जिम्मेवारी नै विपतको बेलामा बढी हुन्छ भन्ने दृढ संकल्पका साथ उनी सेवामा निरन्तर खटिए ।
ड्युटीमा खटिएका अन्य चिकित्सकलाई समेत सम्झाउन थाले । डा.सन्तोष सहित चिकित्सकहरूको टोली पीपीई सेट लगाएर उच्च मनोबलका साथ बिरामीको उपचार गर्न मैदान उत्रियो । अस्पतामा भर्ना भएका संक्रमितको उपचार गर्न ड्युटीमा खटिएको समयमा उनको मनमा कतै आफै पनि संक्रमित हुन्छु की भन्ने नमीठो कुरा खेलिरहन्थ्यो । तर आफू सर्तक रहेर उपचारमा खटेको उनले सुनाए । उनी भन्छन्,–‘मेरो ड्युटी पर्दा म बिरामीसँगको जाँचगर्ने, उनीहरूको नजिक गएर कुरा गर्ने र केही समस्या छ÷छैन भनेर सोध्ने गरेको थिए । कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिँदा मनमा अलिअलि डर त थियो तर म कोरोनाबाट जोगिनुपर्छ । म संक्रमित भएँ भने अरूलाई पनि जोखिम हुन्छ भनेर म सर्तक हुन्थेँ ।’
अस्पतालमा डाक्टर सन्तोषसहित एचए २ जना, स्टाप नर्स २ जना तथा कार्यालय सहयोगी १ जनाको टीम बनाएको छ । प्रत्येक टीमका चिकित्सकले रातदिन निरन्तर ड्युटीमा खटिने अस्पतालमै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । अहिले अस्पतालबाट लगभग सबै बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् । संक्रमितको उपचारमा खटिएका डा. क्षेत्री बैशाख ३ गतेदेखि लगातार ड्युटी गरेर हाल मात्रै घर गएका थिए । कोरोना परीक्षण गर्दा रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि उनी घर फर्किएका हुन् । तर बसाई भने अझै अस्पतालमै छ । उनले भने,–‘हाम्रो अस्पतालमा उपचारत भर्ना भएका बिरामी निको भएका छन् । सबै जना घर पनि गैसकेका छन् म पनि लामो समय पछि घर जान पाए ।’
सिमित स्रोत साधनमा पनि धेरै काम गरेको उनले बताए । बिरामी बढ्न थालेपछि वेड तथा अक्सिजनको अभाव हुन थाल्यो । विभिन्न व्यक्ति, नगरपालिका, जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतलाई आवश्यक सामाग्री माग गरेर यस्ता समस्याको समाधान गरेको डाक्टर क्षेत्रीको भनाई छ । आफूले बिरामीलाई कुनै चिजको अभाव हुन नदिएको तथा उपचारमा गर्नुपर्ने कुनै कसर बाँकी नराखेको उनले दावी गरे । उनी भन्छन्,–‘युद्धमा लडेको सिपाही जस्तो हामी पनि कोरोनासँग लडिरहेका छौ भन्ने सहशुस बेलाबेलामा भैरहन्थ्यो । आँखै अगाडी आफ्नै उमेरको युवाले प्राण त्याग्दा आफू पनि नरहने हुँ कि भन्ने नमीठो महशुस हुन्थ्यो ।’ डा. क्षेत्री लगायतको टिमले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिदा डिस्पोजल पीपीई लगाएका थिए । ड्युटीको समयभरी पानी, खाना र खाजासमेत खान नपाइने भए पनि समूहमा काम गर्दा सहज हुने उनले बताए । उनले भने,–‘हामीले समूह बनाएर काम गरेकाले ड्युटीमा हुँदा असहज भएन । संक्रमितको अवस्था बुझ्न पीपीई लगाएर राउण्डमा जान्थ्यौ । फर्किएपछि डिस्पोज गर्ने गरिन्थ्यो ।’ बैशाख १५ गते देखिको केही समयमा बिरामीको अत्याधिक चाप थियो । बाहिर नै राखेर उपचार गर्ने पर्ने बाध्यता थियो । हालको अवस्थामा पिसिआर टेस्ट भैरहेको भएपनि कमै संक्रमितहरु भेटिन थालेका छन् ।
वर्तमान परिस्थितीमा कोरोना संक्रमणका बिरामीहरु कम भैसकेका छन् । संक्रमित निको भएर घर फर्कने क्रम बढेसँगै अरू नयाँ संक्रमित पनि कम हुँदै गएका छन् । चिकित्सकमा पनि मनोवैज्ञानिक त्रास विस्तारै कम हुन थालेको छ । अस्पतालमा आएका बिरामी निको भएर घर फर्किंदा आफूलाई निकै खुसी लागेको डा. क्षेत्रीले बताए । उनले भने,–‘पहिलो कोरोना केस आउँदा त धेरै डर थियो तर हामीले हाम्रो दायित्व सम्झेर खट्यौँ । उहाँहरू निको हुनुभयो । हामीले हाम्रो दायित्व पूरा गरेर बिरामीलाई निको बनाउन सफल भयौँ जस्तो लागेको छ ।’ अस्पतालमा पनि बिरामीको संख्या हाल न्युन रहेको छ । नेपालगंज मेडिकल कलेजमा त ओ.पि.डी. सेवा समेत सुरु भैसकेको छ । आईसियु, भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीलाई पनि बचाउन सफल भएको भन्दै उनले खुशी व्यक्त गरे । उक्त कोभिड अस्थाई अस्पतालमा ३ जनाले ज्यान गुमाए । कोरोना कम भयो भन्दै लापरवाही नगर्न डा.क्षेत्रीले आग्रह गरे । अझै पनि मास्क, स्यानिटाईजर तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन सबैलाई सुझाव दिए । अबका दिनमा आम नागरिकलाई खोपको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
← सुन्दर र सुरक्षित वडा बनाउन कोहलपुर ७ को पहल
स्वास्थ्यकर्मीलाई कम पारिश्रमिकमा कामनलगाउन मन्त्रालयको निर्देशन →